Is’Art galerie: Hi-« Antsa » anaty hosodoko i Tahina Rakotoarivony | NewsMada
Is’Art galerie: Hi-« Antsa » anaty hosodoko i Tahina Rakotoarivony
Tsy ankiato ny fanehoana ny vokatry ny sanganasa avy amin’ny mpanakanto samihafa, etsy amin’ny Is’Art galerie. Manomboka ny 12 jolay izao, hanome aina ny toeram-pampirantiana ny sanganasa hosodokon’i Tahina Rakotoarivony, mpanakanto araka endrika amam-bika, tsy zovina amin’ny maro sy tsy vahiny ao amin’ny Is’Art galerie.
« Antsa » ny lohatenin’ny fampirantiana, ahatsapana ny fihetsehampon’ity mpanakanto ity, niainga tamin’ny angon-tononkalon’i Jacques Rabemananjara, mpanao politika izay fanta-daza ihany koa eo amin’ny tontolon’ny asa soratra. Mahavariana ny fomba fijerin’ny mpanakanto manoloana ny tranga sy ny fihetsehampo hafa.
Amin’ny maha mpanakanto azy, ananany ny talenta anehoana izany sy anairany ihany koa ny fo sy saina amam-panahin’ny hafa. Porofo ihany koa izany fa miaina sy mampiaina ny hafa ny asa soratra na poezia, heverina ho mipirimpirina any ireny. Ao anatin’ny « Antsa », antenaina fa hanaitra sy hampisaina ny fomba hanehoan’i Tahina Rakotoarivony, mpikolo ny kanto ankehitriny, ny fahatsapan’ireo voalazan’i Jacques Rabemananjara, niaina nandritra ny vanim-potoana hafa. Tsy an-tsoratra io fa an-tsary…